देउता ‘खुसी पार्न’ छाउगोठ, ‘मरे पनि मरिन्छ, छाउ त बार्न पर्छ’
दुई महिनाको अवधिमा दुई किशोरी गुमाइसकेको यो गाउँमा अझै पनि महिनावारी (छाउ) भएका महिलालाई अमानवीय व्यवहार गरिन्छ। तुल्सीको छाउगोठमै मृत्यु भएको नवौँ रातको १२ बजे गाउँकै एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवनाथ योगीको घरमा केही मानिस अत्तालिँदै आए। उनीहरू मोटरसाइकल माग्दै थिए। गाउँमै मोटरसाइकल भएको घर योगीको मात्रै हो। अर्की एक किशोरीलाई सर्पले टोक्यो भनेर अत्तालिएका गाउँलेलाई योगीले मोटरसाइकल दिएर पठाए। तर, बुझ्दै जाँदा १४ वर्षीया ती किशोरीको गालामा किराले टोकेको रहेछ। बिहान पुग्दा चिसो भुइँमा दुईवटा बोरा ओछ्याएर घरमुनिको ‘छाउगोठ’ मा उनी रुन्चे अनुहारमा बसिरहेकी थिइन्।
करोडौं खर्चिएर विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दैलेखमा साविकका आठवटा गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरेका थिए। तर, अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। त्यो बेला पुलिस पनि साथ थियो, एनजिओको पैसा थियो, कैयौं छाउगोठ अभियन्ताले नै भत्काए। तर, अभियानका बेला गाउँका छाउगोठ मात्रै भत्किए, गाउँलेको सोच भत्किन सकेन। अहिले गाउँमा सबैको घरमा ‘छाइछुइ’ उस्तै छ। चाहे शिक्षित होस् वा अशिक्षित।
दैलेखका धेरैजसो छाउप्रथा भएका गाउँमा अहिले छुट्टै छाउगोठ छैनन्। तर, प्रत्येक घरमा अहिले पनि महिला रजस्वला भएपछि गाई र भैंसीसँगै सुत्न बाध्य छन्। ‘छाउ’ भएका महिला गाईभैसीसँगै सुत्छन् तर उनीहरूले त्यसको दूध–दही खान पाउँदैनन्। गाउँले भन्छन्, ‘देउता रिसाउँछन्, घरमा नराम्रो हुन्छ।’
रोपाइँको मेलो सकेर फर्किरहेका महिलालाई शिक्षक भुवन शाही जिस्क्याउँदै थिए, ‘पाखा सर्‍या हौला, नछुए है..!’अनि बर्सादी (पानी छेक्ने प्लास्टिक) ओढेकी कोकिला विकले भनिन्, ‘छुन्नम छुन्नम्, तीन दिन त भो, गोठमै सुतिराछम्।’ फेरि शिक्षक शाहीले सम्झाए, ‘पशुसँग सुतेर नि देउता खुसी हुन्छन्? अस्ति तुल्सीलाई साँपले टोकेर मरेको बिस्र्यौ?’अर्की महिला जंगिइन्, ‘त्यस्तो भनेर हुन्छ, मरे नि मरिन्छ तर देउतालाई रिसाउन दिनुहुन्न।’ अनि उनी आफैँले कहानी सुनाइन्, ‘केही वर्षपहिला रजस्वला भएको बेला घरमा खाना बनाएँ तर खान दिने बेला मेरो मुन्टो बांगियो।
अनि धामीझाँक्रीले झारफुक गरेर सोझ्याइदिए।’ घरमा कोही नभएपछि पाखा सरे पनि उनले बाहिरै खाना बनाएकी थिइन् रे ! ‘अनि देउता रिसाका रै’छन्, छाउ हुँदा भान्सा छोएपछि मरे पनि मरिन्छ। यो त बार्ने नै हो, देउता रिसाउन हुन्न’, विकले भनिन्।
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन ३, २०७४ ०५:०५:३७